Apps Barnoota Sad. 2ffaa Barattoonni akka Salphatti akka Qayyabatan Taasisan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Saayinsii Barnoota Apps Barnoota Sad. 2ffaa Barattoonni akka Salphatti akka Qayyabatan Taasisan
Barnoonni gola keessatti barsiisaan isiniif laatu qajeelatti hinhubbanee? Heerregaa fi fiiziksiin isinitti hinjabaannee? ‘Bilbila qaroo’ [smart phones] qabduu? Intarneetitti dhimma baatuu? Deebiin keessan gaafilee kanniin hundaaf ee taanaan rakkoo keessanniif tarii wonti furtuu ta’uu malu jira.
Yeroo ammaatti barattoonni hedduu barnoota golatti argatan irratti dabalataan barnoota karaa toora intarneetiitiin argatutti jiru. Wonti barreessutti jiru waan biyyoota dhihaatti ta’aa jiru qofaa miti. Dhugaan kuni biyyoota Aafrikaa heedu keessattis mu’atuu qofa osoo hintaane, hidda isaas lafa jala gadi fageessaa jira. Biyya keennattis wonti hintaneef hinjiru. Yoo rakkoo jiru irra aanuu dandeenne.
Keessumatti rakkoon guddaan gara heerreegaa fi barnoota saayinsii gosa birootiin jiru gargaarsa addaa barbaada. Smart phone apps [applications] heerregaa fi fiiziksii bartoota heddu dhiphisaniif fala laatu, waan harka kennachiisuuf jiru fakkaatu. Apps kunniin rakkoolee barattooonni heddu qaban irratti xiyyeefachuu bira ce’ee, akka salphatti barumsi akka namaaf galutti kaayu. Waan ulfaate laaffisu, waan jallate qajeelchu, bifa bashannansiiaa ta’een nama qayyabachiisu.
Apps yeroo ammaa bartoonni mana barnoota sadrkaa 2ffaa heddu addunyaa irratti dhima itti bahaa jiran:
www.khanacademy.org Maths fi gosa barnoota saayinsii biroo
www.rosettastone.com English fi afaan biroo
MyScript Calculator on Itunes [free]
The Princeton Review SAT [bittaan argama]
Graphing Calculator [bittaan naannoo $2]
ACTStudent Maths, English fi barnoota saaynsii biroo [free]
Apps kanniinitti tajaajilamuun dandeettii keessan cimsaa, hubannoo keessan gabbisaa. Apps kunniin barattoota sadarkaa mana barnoota sadarkaa 2ffaa xiyyeeffannaa keessa seensisuudhaan kan qophaayaniidha.
Waa heddu irraa barachuun akka danda’amu shakkiin hinjiru. Gufuun jiru, garuu, barattoonni heddu ‘bilbila qaroo’ fi intarneet dhabuudha. Barattoonni ‘bilbila qaroos’ ta’ee humna diinagdee hinqabne, yoo xiqqaate maaltu akka addunyaa irratti adeemaa jiru hubannoo ni’argatu- sunumtuu waan tokko.
Previous articleWontoota Dhiirsi Niitii Irraa, Niitiinis Dhiirsa Irraa Arguu Hinfeene
Next articleDhibee Iboolaa, Maallattoo isaa fi Tankaarfii Fudhatamuu Malu